कृषी | खबर बिशेष
बहसः ‘स्थानीय तहको अधिकार घटाउँदा मधेसलाई के फाइदा ?’ नेतालाई विज्ञको प्रश्न-राष्ट्रिय सभाका सांसद खल्तीबाट ल्याउने ?
२८ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने प्रावधानलाई सरकारले संविधान संश...
कुखुरा पालन व्यवसायीलाई सरकारले आयकर छुट दिने
काठमाडौं । २९ पुस । सरकारले कुखुरा पालन व्यवसायीलाई आयकर छुट दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्...
अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुन थालेको छ । पदयात्राका लागि सिजन सुरु भएपछि दैनिक आन्तरिक त...
‘म काम गर्न सक्दो रहेछु । मसँग जाँगर रहेछ ।’ कोरिया नआइपुगेको भए यो कुरा थाहा नपाई मर्ने थिएँ कि ! यत्ति थाहा...
टेकुसिथत शुक्रराज सरुवा रोग तथा ट्रपिकल असपतालमा दैनिक सयजनाभन्दा बढी कुकुरले टोकेका पीडित उपचारका लागि आउने...
Posted By: KhabarBisheshon: २८ चैत, २०७३ In: कृषीNo Comments
२८ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने प्रावधानलाई सरकारले संविधान संशोधनमार्फत हटाउन लागेकोमा विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यसरी गरिने अधिकार कटौतील...	Read more
Posted By: KhabarBisheshon: ०१ माघ, २०७३ In: कृषी, मुख्य समाचारNo Comments
काठमाडौं । २९ पुस । सरकारले कुखुरा पालन व्यवसायीलाई आयकर छुट दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुखुरा पालन व्यवसायीलाई आयकरमा छुट दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । शुक्रबार क...	Read more
Posted By: adminon: १९ भदौ, २०७३ In: कृषी, जीवनशैली/स्वास्थ्य, राष्ट्रिय, रोचक विश्व, समाचार, स्थानियNo Comments